March 22, 2019 Beekan Guluma Post in DOM-Diinqa Oromo Media,Literature,Oromo [LANGAUGE]
Asus ROG GU501GM Waliin wal baraa.
Laptop humna processing guddaa qabu dha. Namootni wantoota gurguddaaf barbaadan kan qabaachuu qaban dha. ROG jechuun Republic of Gamers jechuu dha. Gaming Computers kan jedhaman kun, kompiyuuterootni akkanaa hojii kompiyuuterootni kan biroon hojjechuu hin dandeenye rakkoo tokko malee hojjechuuf nu gargaaru. Fakkeenyaaf ediiterootni viidiyoo viidiyoo qulqullina qabuu fi sadarkaasaa eege hojjetanii export gochuu irratti baayyee fayyadamoo ta’u. Akkanuma Arkiitektonnii fi Diizaayineroootnis, Game Environment Designers & Gam Developers hundi hojiin isaanii in salphataaf. Kompiyuuterri kun isa dhumaa miti. Kan kana caalan hedduun ni jiru. Bakka hojiikootii laptop kun waan jiruufin asirratti ibsuuf yaale. Gara spec isaatti yoo deebinu baayyee gaarii fi biyya keessa kan jiran keessaatii bayeessa kan jedhamu dha.
1. 8th Gen Intel Core i7 Processor
3. 6 GB NVIDIA GeForce GTX 1060
4. 1TB HDD with 128GB SSD
fi kan kana fakkaatan qaba. Gatiin isaatis bareedaa dha, doolaaraan 1300 ol dha. Wanti hundisaa bareedaa fi keessumaa asumaan waanin isiniif himee darbu. SSD fi HDD garaagarummaan isaanii, HDD(Hard Disk Drive) jechuun kuusaa yookaan hard disk warra durii fi amma hojiirra jiran dha. Gosi kanaa yoo kufan carraan daataa dhabuu keenyaa guddaa kan ta’eef qaamoota naanna’an kan of keessaa qabu dha. Dabalata kompiyuuterootni HDD ta’an dafanii of hin banan. Gatiin isaaniif gadi bu’aa dha. SSD(Solid State Drive) jechuun teeknoolojii haaraa fi keessa isaatii qaama socho’u kan hin qabne yoo ta’u, kun ammoo yoo balaan irra ga’ellee data keenya carraan baduu isaa gadi bu’aa dha. Wanti baayyee namatti tolu SSD n kun yoo Operating System kanarratti feene kompiyuuterri keenya banamuuf sekoondii 4 haga 10 qofa itti fudhata. Ajaa’iba!!!👈👍. Hangaanillee baayyee xiqqoo ta’uusaanii filatamaa isaan taasisa. Egaan gatiin isaanii hedduu qaalii dha. Kanaaf yeroo hunda storage guutuummaadhaan SSD ta’e bituun in ulfaata. Yeroo hedduu wal makaa ta’a. Wanta qabnu hunda kuusuuf yoo HDD 1TB qabaanne Operating System keenya kan irratti fe’amu ammoo SSD 128GB faa ta’uu danda’a. Egaan kompiyuuterri kunis 1TB HDD fi 128GB SSD qaba. Kanaaf dafee banama. Hojiifillee namatti tola. Waan bittan filadhaa!!! Galatoomaa!!!
Eenyutu? kompiyuutera akkamii fayyadamuu qaba?
Kompiyuuterootni haala garaagaraadhaan sadarkaan kennamuufii danda’a.
1. Kubbaaniyyaa isaan oomishuun:- oomishtootni kun qulqullinaa fi cimina meeshaa oomishaniidhaan yeroo keessa maqaa cimaa argatu. Fakkeenyaaf akkuma APPLE fudhatama guddaa qabu jechuu dha.
2. Platform:- APPLE haga fedhe gatiin qaalii ta’ee jajamus biyyoota akka keenyaa uummatni online moosaajiilee bituu hin dandeenyeef rakkisoo ta’uunsaanii namni caalmaatti akka warra kaan filatu taasisa. Dabalata gatiin isaaniillee baayyinaan uummata keenya biratti qaalii waan ta’eef fudhatamni isaanii gadi bu’a. Kan biraan akka barbaadne wantoota barbaadne irrati fe’uufis ta’e waliif dabarsuuf xiqqoo ulfaataa ta’uusaatiin namootni kan biraa filatu. Kanaaf irra guddaadhaan kompiyuuteroota Windows OS fudhatantu fudhatama qaba.
3. Sadaffaa fi inni murteessaan Specification meeshaalee kanaati. Kana jechuun meeshaan kun RAM isaa meeqa? Processor isaa kami? Bal’inni iskriinii isaa hagami? Harddisk isaa yookaan kuusaan isaa hagam qabachuu danda’a?Storage kun gosi haaraanillee jira SSD kan jedhamu yookaan qofaasaa yookaan hybrid godhamee kan dhufu. Ammoo yoo hojii diizaayinii fi game development fi taphachuuf ta’e dedicated graphics card qabaa? graphics card isaa kunimmoo hagam? kan jedhutu jira. Kana jechuun APPLE inni tokko haga fedhe qaalii fi jajamaa ta’uyyuu HP yookaan Dell isa duuba ba’ee fi wantoota barbaadnu qabu filanna jechuu dha. Kanaaf maqaa qofti yeroo hunda qaalii hin taasisu.
Erga kana hunda jenneetii, gara eenyutu kompiyuutera akkamii fayyadamuu qaba isa jedhutti deemna.
1. Diizaayinaroota, Gama Developers , Software Developers, Arkiteektotaaa fi Injiinerootni hundi, akkasumas namoota Game graphics cimaa qaban taphachuu jaallatan, fi kan kana fakkaatan kompiyuuteroota ciccimoo qabaachuu qabu.
2. Namootni hojii research barreeffamaa fi moosaajii xixiqqaa kompiyuutera hin dadhabsiisne hojjetan akkasumas fiilmii fi wantoota barreeffamaa fi wantoota sasalphaaf fayyadaman kompiyuuteroota giddu galeessa fayyadamuu danda’u.
3. Daa’imman kompiyuutera akka itti shaakalaniif bitamuufii qaba. Kanaaf akka hin miidhamneefis ta’e akka bakka sirriitti ta’etti akka fayyadamaniif desktop kan ta’ee fi haganatti gatiinis specification isaatiinis guddaa hin taanetu isaaniif gaarii dha.
Kanaaf yeroo kompiyuutera bitachuuf kaatan dura hojii keessan ergasii gosaa fi spec isin barbaachisu hubachuu qabdu. Malee maqaan qofti hin ga’u. Akka hin rifanneef kompiyuuterootni waantoota akka dizaayinii fi waan gurguddaaf nu fayyadan sun qarshiin isaanii qaalii dha. Yoo xiqqaate gabaa biyya kanaatti Kuma 25 olii hanga 60 gidduu dha. Yoo gurguddaa barbaaddanis gatii konkolaataa bareedaa tokkootiin kan bitamanis ni jiru. Giddu galeessaan doolaara ameerikaa 5000(Kuma Shan) yookaan qarshii 140,000 fi isaa olis ni jira. Gatiin kun qaraxa malee dha. 😉
Siri, Alexa, Cortana fi Google Assistant maali?
Teeknooloojiin akkuma guddataa deemeen sadarkaan irra gahaa jirru nu ajaa’ibus warri waa uumu isaaniif xiqqoo taatee itti argamtee jirti. Kanaaf software (moosaajii) harkaan ajajnu bira taranii waggoota hedduu dura yaada AI(Artificial Intelligence) jedhamu fidan. Wanti kun hojii amma harkaan wantoota bannee ajajnu ammaaf haga ta’e boodatti ammoo guutummaa guutuutti hambisuudhaan meeshaaleen ofiisaanii yaadanii akka waa hojjetan taasisuu dha. Ajaja keenya otuu hin eegin jechuu dha. Inni sun otuu hin ga’in ammaaf gurguddoon akka Watson (kompiyuuter AI ta’ee fi qabatamaadhaan gargaarsa wantoota garaagaraa irratti ogeessotaaf kennaa jiru kan kubbaaniyyaan IBM hojjetee fi waggaatti bajata guddaa baasuudhaan irratti qorannoo dabalataa gochaa jiru) hojiirratti arginus, ammaaf wantoota garaagaraa harkaan hojjechuu nu nuffisiisanii fi yaadachuu dadhabnu akka meeshaaleen afaaniin ajaja nurraa fudhatanii nuuf raawwatanii fi yaadannoo qabatanii booda nu yaadachiisaniif kanneen uumaman isiniif tarreessa.
1.Siri :- Siri n meeshaalee kubbaaniyyaan APPLE oomishu kanneen akka iPhone, iPad, iPod, i Watch, Mac fi Apple TV irratti kan hojjetuu fi wantoota raawwachuu barbaaddan otuu bilbila yookaan meeshaa keessan harkaan hin tuqin gaaffii gaafachuu, bilbila namatti bilbiluu, ergaa barreessuu fi erguu, alarm fi wantoota garaagaraa ajajnee hojjechiisuuf nu fayyada. Sirin operating system IOS waliin kan dhufu yoo ta’u garuu fayyadamuuf dirqama internet banuu qabna. Kanaan achi ajajoota salphaa internet malee kan nu gargaaruu danda’u voice control kan jedhamutu nuuf banama. Siri dhaan na jaallattaa? yoo jettaniin isin jajjabeessitillee malee deebii isiniif hin dhabdu.
2. Alexa :- Alexan kubbaaniyyaa Amazon speaker Echo jechamu kan mana keessa kaawwannuu fi tajaajila kan biraas nuuf laatu ajajuuf jalqaba kan uumamte yoo ta’us amma akka dabalataatti bilbilootaafis hojiirra kan oolaa jirtu dha. Alexanis akkuma warra kaanii ajaja baayyee fudhattee nu gargaaruu dandeessi.
3. Cortana :- Windows operating system meeshaalee hojjetan hundaa irratti kan OS waliin dhufu yoo ta’u. Akkuma warra kaanii ajaja afaaniin fudhachuudhaan wantaoota hunda nu gargaaruu kan dandeessuu fi bilbiliita Windows ta’an irrattillee kan hojjechaa jiru dha. Jalqabuuf kan yaadame 2009 ta’us jalqabaaf Windows 10 kompiyuuteraa fi Bilbilootaa irratti bara 2015 jalqabame.
4. Google Assistant :- AI akkuma warra kaanii google kalaqee fi akkuma warra kaanii bilbiloota, smart watch fi meeshaalee mana keessaa irratti kan hojjetuu fi ajaja barbaadnu afaaniin qofa nurra fudhatee nu gargaaru dha. Meeshaalee IOS ta’an irrattillee akka dabalataatti bara 2017 kan hojjechuu eegale yoo ta’u. Bara 2017 tti meeshaalee miiliyoona 400 ol irratti fe’amee ture.
Dhuma irratti akkuma beektotnii, qorattootnii fi namootni hedduun yaadda’an AI kun nu faayyaduu danda’as ammoo miidhaansaa hoji dhabdummaa irraa kaasee hamma wantoota garaagaraadhaan jireenya keenya balaa irra buusuu danda’utti ga’a kan jedhan akka jiran isiniif ibseen, isin yaada isin qabdan isin gaafadheen xumura.
Ogeessotni fayyaas ta’e namootni hundi waan kana otuu dubbistanii baayyee gaarii dha.
Warra iPhone fayyadamtan hundaaf
Medical ID kan jedhamu bilbiloota IOS ta’an jechuun iPhone warra IOS 8 fudhachuu danda’an booda kan kubbaaniyyaama APPLE irraatii application duukaa oomishamu dha. Faayidaa isaa yoo hubanne baayyee barbaachisaa dha. Sababni isaas rabbi isinitti hin fidin malee otuu adeemtanii dhukkuba duraan qabdaniin yookaan akka tasaas ta’e balaa tokkoon of wallaaluu dandeessu. Yeroo kanatti bilbila iPhone baattan kana irratti Medical ID kan jedhamu yoo guuttanii qabdu ta’e namni waan kana beeku bilbila keessan irraatii banee ilaalee waan isinitti hin tollee fi dhukkuba duraan qabdan baree qoricha fi yaalii akkanumas waan dhugamuu fi nyaatamu kan allergy isinitti ta’u akka isiniif hin kennineef of eeggata. Dabalata, ogeessotni fayyaas gargaarsa iniif gochuu qaban odeeffannoo kana irratti hundaa’anii iniif kennuudhaan rakkoo tokko malee akka yaalamtaniif fayyada. Hunda caalaas achirratti bilbiloota gaafa rakkoon isin quunnamuuf guuttan kanneen akka bilbila maatii fi hiriyyaa otuu bilbila keessan unlock hin godhin yookaan password keessan otuu hin galchin tasa otuu bilbila keessan bananii odeeffannoo iccitii isin qabdan otuu hin argin bakkeerraan wanta kana(Medical ID) banuudhaan irratti bilbilanii isniif dirmachiisuu danda’u.
Jalqaba irratti bilbila iPhone keessan irraatii Health kan jedhu banaa.
Itti aansuudhaan Edit kan jettu tuqaa.
Itti aansuudhaan odeeffannoo barbaachisoo hunda kanneen akka fayyummaa keessan, bara dhalootaa(ofiisaas calendar irraatii fudhachuu danda’a barbaaddan edit godhaa), waan jibbitan (allergy), gosa dhiiga keessanii, ulfaatina, dheerina fi bilbila nama gaafa rakkoo akka isiniif dirmatu barbaaddanii walitti dhufeenya keessan waliin guutaa. Dhuma irratti Show Wehn Locked kan jettu banaa sababni isaas bilbillli keessan otuu cufaa ta’ee jiruu yoo of wallaaltan namni biraan otuu hin banin lock screen irratti akka odeeffannoolee kana argatu isin fayyada.
Xumurtaniittu! akka hojjete mirkeneeffachuuf suuraa screenshot ani maxxanse kanarraatii tartiiba 4 kaasee jiru itti fufaatii dubbisaa
Akkamiin fiilmii afaanota biraadhaan hojjetaman subtitle Ingliffaa hin qabne subtitle Ingliffaa itti goonee ilaaluu dandeenya?
1. Jalqaba google irratti “English Subtitle for ” jettanii itti aansuudhaan fiilmii barbaaddan sana barreessitanii bara inni itti gadhiisame mirkaneeffachuudhaan search gootu. Warreen dhufan keessaatii marsariitii yifysubtitles.com jedhu keessa kan jiru filachuudhaan download godhaa.
2. Itti aansuudhaan VLC banaatii subtitle kan jedhu irratti cuqaasuudhaan-> add subtitle file kan jedhu cuqaasaa.
3. Itti aansuudhaan bakka subtitle file yookaan .srt sub jiru banaatii Open kan jettu cuqaasaa.
4. Xumurtaniittu! amma fiilmii sana yoo ilaaltan jalaan afaan Ingiliffadhaan isiniif barreessuu eegala.
Maaloo waan barnoota nuuf ta’u irratti haa xiyyeeffannu!!!
Fakkeenyuma kana fudhadheen dhiisaatii isinumti murteessaa!
Nama lamatu jiru youtube irra. Jarri kun lamaan beekumsaanis ta’e odeeffannoo barbaachisaa barnootaan deeggarame uummataaf kennuudhaan wal hin gitan. Solomon kan jedhamu qopheessaan Tech Talk With Solomon barnoota cimaa nama qabuu fi dandeettii waa ibsuu nama qabu dha. Barnootni inni kennus akka sadarkaa addunyaatti kan namatarkaanfachiisu dha. Garuu Seble kan jedhamtu kun tarii na fayyada yoo jedhe namni filachuu danda’a garuu oduu eenyullee nama biroo irraatii argachuu danda’u youtube irraatii galii argachuuf odeessaa oolti. Safuu hawwasaa cabsuu irrayyuu maqaa waaqaa sagal waamaa dhimma golatti odeeffamu bakkeetti haasoofti. Akkana ta’eetu egaan kan garaagarummaansaa na aarse. Isheen oduu akkanaa odeessitee isayyuu waan waggaa hin caalle keessatti view miiliyoona 5 ol qabdi. Solomon ammoo otuu hin nuffin TV fi Youtube akkasumas facebook dhaan uummatasaaf beekumsaaf hiruuf dhama’ee isayyuu erga eegalee waggaa 8 kan darbe view miiliyoona 1 qofa qaba. Kun maaliif ta’e yoo jenne uummatni keenya qoosaa oduu(baaltii) fi wantoota beekumsa nuuf hin kennine qofa waan hordofuu jaallannuuf dha. Hidhaa akkanaa keessaatii baanee wantoota barnoota nuuf ta’an kan nuuf kennan namoota adda addaa gama hundaan facebook, youtube, telegram fi TV irratti haa hordofnu. Like fi Share gochuu akkasumas hamma libsuu ijaatti hiriyyoota keenya invite gochuu akka qoraattii dheessuu haa dhaabnu. Keenyammoo haa guddisnun jedha. Ulfaadhaa!!!
CIA fi NSA
CIA (Central Intelligence Agency):- waajjirri kun nageenya lammilee USA biyya keessattiif alatti addunyaa guutuu irratti basaastota gosaa fi dandeetti sadarkaa garaagaraadhaan leenji’an ciccimoo ramaduudhaan kan tiksu dha. CIA keessatti hojii garaagaraatu jira. Kana hundaa keessatti loltoota USA keessatii kan filamanii fudhataman akkuma jiran bakkeedhaas kan seenan jiru. CIA kan seenu akka biyyoota kaanii nama barnootaa fi waan hundaatti dadhabaa ta’e otuu hin taane nama beekumsaa fi si’aayina akkasumas kennaa adda addaa qabutu carra seenuu argata. Qabxiinillee nama daangeessa. Kana hunda dura lammummaa USA qabaachuun dirqama dha. CIA keessatti hojiin teeknooloogii jiraatuyyuu kan waan sana irratti seeraan hojjetu NSA dha.
NSA (National Security Agency):- USA tti wajjira basaasaa fi nageenya teeknoolojii biyyitti dha. Waajjirri kun bilbila harkatti baannurraa eegalee hamma saatelaayitii samii keessa jiraniitti hojjettoota kennaa garaagaraa qabanii fi balaa biyyittii fi biyya lafaa guutuu irratti dhufuu malu warra qolachuuf qophaa’een kan guute dha. NSA keessatti wanti hin hojjetamne hin jiru. Spyware biyyi USA ittiin biyya kan biraa basaastuu fi moosaajiilee garaagaraa hamma hardware dhimmoota garaagaraaf fayyadaniitti hojjechuutu as keessatti deemsisama. Walumaa galatti argannoolee basaasa teeknooloojiif ta’an hunda kan keessatti iccitiidhaan kalaqamaa oolan dha. As seenuuf barnootatti qabxii qabaachuu qofa otuu hin taane kennaa waa uumuu qabaachuun dirqama taati. Edward Snowden kan bara 2013 tti odeeffannoo iccitii mootummaan USA lammilee isaa basaasuu fi biyya lafaa basaasa jedhu hatee miliquudhaan hamma yoonaa biyya Raashiyaatti baqattummaarra jiru NSA keessaatii hojjetaa cimaa ture.
Hub:- NSA fi NASAn garaagari(wal-adda)
NISS fi INSA
NISS :- National Intelligence & Security Service
Dhaabbata Odeeffannoo fi Basaasaa Itoophiyaa kan ta’ee fi nageenya biyyittii biyya alaaf keessatti kan tiksuu fi karaa biraa waajjira tikaa jechuu dha. Walumaa galatti nageenya biyyaa warra basaastota garaa garaatti fayyadamuudhaan eegan dha.
INSA :- Information Network Security Agency
Dhaabbata Nageenya Odeeffannoo fi Neetoorkii Itoophiyaa yoo ta’u waajjirri kun kallattiidhaan wantoota nageenya odeeffannoo kanneen akka bilbila, internet, moosaajiilee fi wantoota teeknooloojii waliin wal qabatan hunda irratti alaaf keessatti nageenyasaanii tiksuu fi 😜 uummatas basaasuu irratti kan hojjetan dha. Dabalata moosaajiilee odeeffannoo biyyaa kuusanii fi marsariitiilee mootummaa ta’an kan dhaabbata dhuunfaa hojjechiisuu hin qabnes develooperoota as keessa jirantu hojjeta jechuu dha.
Haala facebook account sirrii fi nageenyisaa eegame ittiin banannu yookaan isa qabnu ammoo akka booda nu jalaa hin cufamnetti sirreeffannu.
1. Jalqaba Gmail yookaan tajaajila email kan kennan tokko irraatii email banadhaa yookaan qabdu taanaan isuma fayyadamtuutii dhiisaa.
2. Maqaa yookaan bilbila fayyadamuurra Email keessan sana bakka email or phone number jedhutti galchaatii darbaa.
3. Erga Signup gootanii xumurtaniin booda email keessan seenaatii facebook fi email keessan akka wal hidhatuuf email facebook irraatii isiniif ergameen confirm godhaa. Akkanatti yoo password irraanfattanillee email irratti akka hidhi reset ittin gootan isiniif ergamu taasisuu dandeessu. Bilbila akka primary tti otuu hin fayyadamtan ta’ee gaarii dha.
Isa qabnu ammoo Setting keessa seenuudhaan General jala -> Contact kan jedhu jalatti kan argamu Primary Email keenya email sirriitti jijjiiruu qabna. Kanaaf jarjarsuudhaan bantanii hin fayyadaminaa, warri akkanatti jirtan sirreeffachuudhaan booda account keessan akka galuu isin hin dhowwineef of baraaraa.
Yoo akka tasaa password keenya irraanfanneef Email fi Bilbila irratti akka code nuuf ergamu filannoo lamaansaa argachuu akka dandeenyutti dursinee sirreeffachuu qabna.
Dabalata password yeroo itti gootan password dadhabaa hin fayyadaminaa. Fakkeenyaaf maqaa nama jaallattanii, jechoota hiika qaban fi lakkoobsa bilbilaa keessan matumaa akka passwordtti hin fayyadaminaa. Warreen kun tilmaamaan waan bira ga’amuu danda’aniif gadhee dha. Dictionary attack kan jedhuuf isin saaxila. Kun akka hin taaneef password dheeraa fi hiika hin qabne kan mallattoolee, lakkoobsotaa fi qubee guddaaf xiqqaa wal makaa qabu fayyadamuu fi yaadachuu danda’uu qabdu. Fakkeenyaaf:-
iPhone fi iPad(Meeshaalee Kubbaaniyyaa Apple) irratti akkamiin Amaariffa barreessuu dandeenya?
Application kan Keyboard Amaariffaa nuuf kennan hedduu keessaatii tokko kan ta’e Agerigna dhaanin isinitti argisiisa.
1. Jalqaba App Store banaatii Agerigna Keyboard jechuun barbaadaa.
2. Akkuma suuraa screenshot irratti mul’atutti Get kan jettu tuquudhaan download godhaa.
3. Yeroo download goodhee xumuru banuudhaan Install Font kan jettu tuqaa.
4. Itti aansee kan dhufu marsariitii jaraa waliin second muraasaaf safari browser wal quunnamuuf banama ergasii otuu isin hin tuqin cufama.
5. Itti aansuudhaan yoo isin filachiiseef isa Ethiopian Font jedhu filadhaa kanaa achi ofiisaa filatee darba.
6. Itti aansuudhaan Install kan jettu karaa mirgaa gubbaa irraan jirtu tuqaa.
7. Password bilbila keessanii galchaatii darbaa. Ergasii install kan jettu ammas dhuftu tuqaatii darbaa. Dabalata kan godaan ol baatu Install kan jettu tuqaa.
8. Dhuma irratti Done kan jettu tuquudhaan xumuraa.
9. Note banuudhaan amma akka keyboard amaariffaa dhufe mirkaneeffadhaa. Yeroo kanatti keyboard keessan irraatii mallattoon Globe mul’achuu qabdi.
10. Mallattoo Globe sana tuquudhaan keyboard Emoji dhufu irraatii ABC kan jettu tuquudhaan amma gara Amaariffaatti jijjiirtan jechuu dha.
Hub:-Wanti dagachuu hin qabne keyboard kun baayyee salphaa kan isa taasisu Fidala Amaariffaa tokko yeroo tuqxan irra keessaan guutummaasaa kan hordofan waan isiniif tarreessuuf salphaatti barreessuu isin dandeessisa.
Akkamiin waraqaa qorannoo (Research) tti page number kennina?
Yeroo baayyee akka itti page number waraqaa research tti kennan wallaaluun namoota baayyee akka rakkisu ofiikoorraa kaaseen argeera. Sababni isaas cover page tti lakkoobsi hin kennamu, dabalatee yeroo baayyee table of content lakkoobsa hin barbaadu. Kanaaf Acronym fi wantoota table of content dura dhufan qofaatti Roman(i,ii,iii….) kenninee boqonnaa jalqabaatii kaasee ammoo Arabic(1,2,3..) kennuu akkamittiin akka dandeenyu tartiibaan isiniif ibsa.
Jalqaba fuula jalqabaa irratti Insert kan jedhu cuqaasuudhaan Page Number kan jedhu irratti ammas cuqaasuudhaan gosa barbaaddan filadhaatii irratti cuqaasaa.
Amma fula hundatti jalqabaatii kaasee ofiisaa lakkoobsa waan kenneef isa sirreessuuf tartiiba hidhata inni fuula jalqabaa yookaan cover page waliin qabu kutuu qabna. Kana gochuuf fuula lammaffaarra page number isa 2 jedhu irratti double click goona sana booda gubbaarraatii Link to Previous kan jedhu irratti cuqaasna. Amma hidhatasaa waan kutneef isaa gadi kan jiran qofaatti edit gochuu dandeenya. Amma fuula jalqabaa irra page number 1 jedhu irratti cuqaasnee select gochuudhaan gabatee cuqoo(Keyboard) irraatii delete tuquudhaan balleessina. Itti aansuudhaan fuula lammataa irra lakkoobsa jiru irratti double click gochuudhaan Insert bira deemnee Page Number irratti cuqaasnee Format Page number kan jedhu irratti ammas cuqaasnee kan itti aansee dhufu irratti gosa lakkoobsa Roman filannee dabalata Page Numbering kan jedhu jalaatii Start at kan jedhu i yookaan 1 tti jijjiiruudhaan Ok kan jettu cuqaasnee xumurra.
Sana booda table of content kan jedhu akkakootti fuula 3 ffaa irra kan jiru gubbaa deemnee Page Layout jalaatii Page Setup kan jedhu banuudhaan Apply to kan jedhu cinaatii This Point Forward kan jedhu filcachuudhaan Ok kan jedhu cuqaasnee xumurra. Kun warra gubbaatii Roman Number argatee fi warra gad hafe gargar hiruuf fayyada.
Sana booda fuula duwwaa(blank page) tokko uuma isa delete tuquudhaan deebistanii ol buttu. Itti aansuudhaan Boqonnaan tokkoffaa fuula inni irra jiru bira deemuudhaan fakkeenyaaf kan koo irratti table of content tti aansee fuula shanaffaa irra jira. Page number shan jedhu irratti double click gochuudhaan akka dura argitanitti gubbaarraatii Link to Previous kan jedhu irratti cuqaasna. Itti aansuudhaan fuula afraffaa 4th page irratti ol deebinee page number 4 jettu select goonee delete tuqna.
Dhuma irratti shanaffaatti darbinee page number 5 jettu irratti double click gochuudhaan Insert bira deemnee Page Number cuqaasnee Format Page Number kan jedhu irratti ammas cuqaasnee kan itti aansee dhufu irratti gosa lakkoobsa Arabic(1,2,3) filannee dabalata Page Numbering kan jedhu jalaatii Start at kan jedhu 1 tti jijjiiruudhaan Ok kan jettu cuqaasnee xumurra. Kanuma!!! Gaaffii qabaannaan naaf barreessaa. Akka barreeffamaan sirritti namaaf hin ifne nan hubadha, guyyoota muraasa keessatti viidiyoodhaan isiniif qopheessaatii hangasitti invite gochuu hin dagatinaa. Ulfaadhaa!!!
Odeeffannoo barbaachisoo #1
Ogeessi kompiyuutera hojiinsaa maali? maalfaa hojjechuu danda’a? Maal irratti daanga’a?
1. Sadarkaadhaan yeroo qoodamu sadarkaa diplomaatti computer science kan jedhamu hin jiru. Diploma dhaan IT qofatu jira.
2. Gara degree tti yoo dhufnu IT fi Computer Science(CS) n harka caalu wal fakkaatu. Dhibbaa dhibba ta’us gosi isaanii tokkuma. Sababni isaa IT namni baratu wanta namni CS baratu baratee darba. Garaa garummaan isaanii xiyyeeffannoo irratti. Xiyyeeffannoon IT kanneen akka kompiyuutera suphuu, software(moosaajii) namni kaan akka salphaatti fe’uu fi qiqqixeessuu(configure) gochuu hin dandeenye fe’uu fi qiqqixeessuu, nageenya kompiyuuteraa fi neetoorkii tiksuu, neetoorkii xiqqaa haga guddaatti design gochuu fi diriirsuu dabalata suphuu irratti baayyinaan xiyyeeffata.
Yoo gara computer science(CS) tti dhufnu wanta IT namni barate hojjechuu danda’u hunda hojjetus, harka caalu software development irratti xiyyeeffata. Kana keessatti moosaajii xiqqaatii hanga guddaatti develop gochuu, nageenya kompiyuuteraa sadarkaa saayinsii isaatti herregaan kan deeggarame irratti hojjechuu(kanneen akka cryptography) fi kanneen biroo irratti xiyyeeffata.
Yeroo hojii qacaran dhabbatni hedduun IT fi CS wal jijijjiiraa fudhatu. Sababni isaa garaagarummaan isaanii sadarkaa biyya keenyaatti gita hojii jiraniif hanganatti waan addaan fagaate miti.
HUB:- Namni IT fi CS barate waan hunda beeka jechuu miti. Isuma baratettiyyuu sadarkaa degree jalqabaatti kan baruu qabu qofaa bara. Dabalata ammoo namootni bilbilaa fi waan garaa garaa naaf hojjedhu baratteetta jechuu malu. Kun dogoggora dha. Sababni isaa namni akka dhuunfaatti leenjii dabalataa fi beekumsa yeroo keessa dhufe yoo qabaate irraan kan hafe waan barate irraan kan hafe teeknooloojii waan ta’eef qofa hunda hojjechuu danda’a miti. Inni dhumaa namni IT fi CS barate wantoota gurguddoo malee barreeffama barreessu fi hojii secretary kan hojjetu akka hin taane baruun barbaachisaa dha.
Keyboard shortcut yeroo hunda isin fayyaduu danda’an. Namootni hedduun hin hubanne!
1. Ctrl + D (Fuula daawwataa jirtan bookmark gochuuf)
2. Ctrl + T (Tab haaraa banuudhaaf)
3. Ctrl + R (Refesh gochuuf)
4. Ctrl + Tab (Tab hunda gidduu jijijjiiraa ilaaluuf)
5. Ctrl + W (Of eeggadhaa!!! Tab active ta’ee jiru cufuuf fayyadaatii)
6. Ctrl + Enter(Yeroo address tokko barreessitanii .com jechuu nuffitan fakkeenyaaf google jettanii itti aansuudhaan Ctrl fi Enter fayyadamtanii google.com isinii bana)
7. CTRL + L yookaan F6 yookaan ALT + D(kallattiidhaan mouse malee gara address bar deemuuf)
1. Windows Key + E (Computer or My Computer banuuf)
2. Windows + R (Run command banuuf)
3. Alt + Tab(Moosaajii banamanii jiran gidduu otuu guutummaatti hin banin oliif gadii deemuun filachuu ergasii gadhiisuu)
4. Windows Key + D(Wanta banamee jiru hunda minimize gochuuf)
5. Alt + Space (Wanta banamee jiru irratti yoo akkas goone option window sanaa nuuf fida kun ammoo mouse malee akka window kamiyyuu akka barbaadne goonuuf nu gargaara)
baayyeen ni jiru garuu Windows 7, 8, fi 10 gidduutti shortcut kun muraasni isaanii garaa garummaa qabaachuu danda’u kan dur turee amma hafellee jiraachuu mala. Caalmaatti baruuf dubbisaa!!!
Facebook Viidiyoo ofiin of banu (Auto-Play) of godhu cufuu
Viidiyoo fedha keenya malee akka tasaa of banee kaardii nutti lakkoofsisuu akkamiin cufuu dandeeya?
Setting banuudhaan -> Videos kan jedhu irratti cuqaasuudhaan -> warra argaman keessaatii Auto-Play Videos kan jedhu cinaa kan jiru -> irratti cuqaastanii default kan jedhu irraatiii gara Off tti jijjiiruu qofa dha. Al tokko akkas gootanii jennaan bilbila irratti kompiyuutera irratti setting kanumatu hojjeta. Viidiyoon facebook irra jira otuu isin hin barbaadin banamanii interneetii isin jalaa hin dadhabsanis bilbila irratti mobile data dhaan yeroo fayyadamtan ammoo qarshii isin jalaa hin fixu jechuu dha.
Maaliif document tokko fakkeenyaaf word yookaan excel yeroo desktop irratti yookaan folder keessa jiru keessatti maqaa sanaan lama ta’ee argina?
Wanti kun nama baayyeetti gaaffii ta’a. Warruma ogeessa kompiyuuteraa ta’anittillee hubatanii waan hin ilaaliniif waan biraa itti fakkaachuu danda’a. Garuu wanti kun document keenya sun yeroo banamee edit gochaa jirrutti hamma waan hojjechaa jirru xumurree document sana cufnutti copy waan ta’e fakkaatee taa’a. Iccitiin kanaa maalinni yoo jettan wanta salphaa dha. Kompiyuutera irratti document tokko yeroo save gootan yookaan keessan harddisk yookaan kuusaa irra keessu. Ergasii akki itti kompiyuuterootni hojjetan hubachuun barbaachisaa dha. Yeroo nuti wanta tokko moosaajiis(software) ta’e document kan fedhe bannee fayyadamuutti kaanu kompiyuuterri keenya harddisk irra isa jiru RAM irratti baneetu isin hojjechiisuutti ka’a. Hamma save gootanittis wanti sun copy fakkaatee document lama ta’ee mul’ata akka suuraa kanarraa argitanitti. Kanaaf erga cuftanii booda document keessan sun tokkittii ta’a. Sana jechuun RAM irraatii hojiisaa xumuree gara Harddisk tti deebi’e jechuu dha. Kanaaf waan akkanaa yoo isin mudate akka copy yookaan virus isinitti fakkaatee balleessuu hin yaalle.
Hiikna mallattoo Power Button irra jiruu meeqan keenyatu beeka?
Dhaabbata IEC(International Electrotechnical Commission) jedhamu kan standard meeshaalee electronics ta’anii fi mallattoolee electronics waliin wal qabataniif raggaasisuun jalqabaaf bara 1973 ALA tti bifa garaagaraatiin mulachuu kan jalqabe yoo ta’u amma irratti IEC 60417-5009 Standby Symbol jedhamee galmaa’ee kan jiru dha. Kana hunda erga dubbanneetii gara hiikasaatti yeroo deebinu dhufaatiinsaa lakkoobsa Binary yoo ta’u. Innis 0 fi 1 dha. Walumaa galatti barnoota technology keessatti ballinaan hiika True or False, On or Off qabaatus akka switch tti yeroo fayyadu 1 jechuun Ibsuu yookaan banuu 0 jechuun dhaamsuu yookaan cufuu ta’a. Kanaaf wanti salphaa ta’ullee asirratti yeroo mul’atu namni hiikasaa sirriitti beekuu dhabuu danda’a. Egaan akkuma suuraa isa lammaffaarratti argitan 0 fi 1 walitti dabalamaniitu achirra jiru. Kana jechuun Switch lama hin qabu button kana fayyadamneetu meeshaa sana banna, isuma fayyadamnees cufna jechuuf dha.
Nageenya Odeeffannoo #1
Keylogger , Phishing maali? Akkamiinis ofirraa eegna?
Keylogger:- jechuun software(moosaajii) namootni nu basaasuu barbaadan, mootummaa otuu hin taane namootumti kaan tolaan argatanii kompiyuuter yookaan bilbiloota keenyaa fi kan nuti irratti fayyadamnu kan biraa irratti fe’anii ittiin wanta nuun hojjennu nu hordofuu danda’an dha. Keylogger kanaan namni sun yookaan yeroo achiitii deemtan kompiyuuteruma sanarraa waan isin hojjechaa ooltan email fi password keessan otuu hin hafin ilaaluu danda’u yookaan network irratti waan isin galchitan hunda argachuu danda’a. Keylogger barbaaddanii arguun isin rakkisa. Akka software kaanii mul’atee banamee hin taa’u. Jalqabuma akka dhokotee isin basaasutti waan uumameef hin mul’atu. Gaafa fe’amus yookaan email fakkaatee isinitti ergamee yeroo bantan otuu isin hin barin fe’ama. Yookaan qaamumaan meeshaa sana namni argachuu danda’u irratti fe’uu danda’a.
Phishing :- jedhuun mala ittiin website yookaan marsariitii tokko fakkeessanii namootatti link(hidha) sobaa kan password keenya ittin hatuu danda’amu nutti ergan dha. Fakkeenyaaf facebook karaa seennu yookaan login page isaa kan sirriitti fakkaatu garuu URL isaa yoo ilaaltan facebook.com hin jenne nutti erguudhaan yeroo nuti viidiyoo qoosaa, suuraalee ajaa’ibsiisoo fi kan biroo kan akka oduu haaraafaa seenee bannu yoo email fi password facebook galchite malee hin darbitu jedha. Yeroos nuti dhuguma seenee yeroo guutnee login jennu inni waa hunda fuudhee namoota sanaaf erga. Yookaan ammoo facebook kee hack ta’e security isaa dabaluuf takkaa link(hidha) kana hordofuudhaan seeniitii sirreeffadhu jedhes dhufuu danda’a. Kanaaf link yookaan hidha hunda akka argitan hin baninaa. Bantanis kan password isin gaafatu irratti hin guutinaa.
Itti aansee haala itti Keylogger akka meeshaa keenya irra yookaan mopiyuutera mana interneetii irra jiraachuu fi dhiisuusaa barrun isiniif qooda.
Nageenya facebook account #3
2-FA(2-Factor Authentication) jechuun Maali? Akkamiin fayyadamna?
2-FA n baayyee wanta murteessaa fi hundi keenya fayyadamuu qabnu dha. Sababni isaas meeshaa irraatii facebook bannee fayyadmnee hin beekne irratti yeroo email fi password sirriidhaanillee seenuu yaallu nu hin seensisu. Kun faayidaa guddaa dha. Sababni isaas namootni password keenya karaa garaagaraa argachuu danda’u. Haa ta’u malee 2-FA fayyadamna taanaan tasuma otuu password keenya beekaniillee seenuu hin danda’an. Sababni isaa yeroo hunda yeroo account keenya meeshaa yeroo hunda itti hin fayyadamne kan akka kompiyuutera internet cafe fi bilbila hiriyyoota keenyaa irraatii seenuu yaallu bilbila keenya irratti code haaraa generate gochhuudhaan erga. yoo isa galchine malee tasuma email fi password sirri ta’ellee hin banu.
Kana akka ta’u gochuuf jalqaba bilbila keessan faceboo irratti galchitanii qabaachu qabdu. Kana jechuun dirqama lakk. bilbila keessanii public ta’uu qaba jechuu miti.
Setting banaa -> itti aansuudhaan Security and Login -> itti aansuudhaan -> use two-factor authentication kan jedhu cinaa Edit kan jettu cuqaasuudhaan -> itti aansee kan dhufu irratti Get Started kan jedhu cuqaasaa. -> itti aansuudhaan Text Message kan jedhu filachuudhaan Next kan jedhu cuqaasaa. Dhuma irratti Finish kan jedhu cuqaasuudhaan xumurtu. Yeroo hunda yeroo bilbila keessan irraatii seentan isin rakkisee akka isin hin nuffisiisneef al takkaa Save Browser kan jedhu filachuudhaan bilbila ofii keessaniif qofa qabattan yoo ta’e save gochuu dandeessu. Ulfaadhaa!!!
Gaaffii akkamiin bilbila galchinaa fi kan biroo yoo qabaattan keessaan naaf barreessa.
Yeroo duunu eenyutu facebook account keenya dhaala?
Legacy Contact kan jedhamu yeroo lubbuun jirru setup goonee yeroo duunu namni sun akka account keenya dhuunfatu gochuu kan nu dandeessisu jiraachuusaa beektuu?
Jalqaba Setting irratti cuqaasi -> itti aansuudhaan General -> itti aansuudhaan Choose Friend bakka jedhutti maqaa nama account kee dhaalchisuu barbaaddee guuti -> itti aansuudhaan Add kan jettu cuqaasuudhaan ergaa barreeffamaa nama sana beeksisu akka nama sana bira ga’uuf Send kan jettu cuqaasi -> dhuma irratti Ok kan jettu cuqaasuudhaan xumuri.
Yoo hin barbaadne irraa haquuf akkuma suuraa isa dhumaa irratti step yookaan tartiiba lamaan bakka tokkotti mu’isuuf yaaleen irraatii haquu dandeessu. Ulfaadhaa!!!
Nageenya facebook account #2
Yoo account keenya shakkii nageenya keenyaaf nurratti cufame akka dhabnee hin hafneef dursinee maal gochuu qabna?
Malli kun dirqama namoota amantanamoo fi jarri waliin mari’atanii code isaan bira dhufu waliif hiranii si jalaatii reset hin goone ta’uusaanii yeroo mirkaneeffattu kan fayyadamtu qofa dha. Keessumaatii namoota sana keessaatii 1 nama baayyee amantu otuu ta’ee gaarii dha.
Malli kun yeroo account kee si jalaatii cufamee kubbaaniyyaan facebook haala hundaan si akka hin taane ibsee tasuma akka deebitee hin seenne yoo si godheef kan fayyadu dha.
Innis al tokko qofa ammuma gaafa nagaadhaan fayyadamuutti jirtu egereef namoota amantu 3 yookaan 5 filtee yeroo account kee balaan sun irra ga’u deebistee banuuf code gaafattu facebook jara kanatti code siif ergu isaaniif bilbiltee akka siif ergan gooteetu siif banama jechuu dha.
Jalqaba Setting bira deemta-> itti aansuudhaan Security and Login -> itti aansuudhaan Choose friends to contact if you get locked out kan jedhu cinaa Edit kan jettu irratti cuqaasuudhaan -> Choose friends kan jedhu ammas cuqaasuudhaan -> popup windows(modal) qofaatti fuuldura dhufee banamu irraatii Choose Trusted Contacts kan jedhu cuqaasuudhaan -> tokko tokkoon hiriyyoota sirriitti amantu sana galchita. Dhuma irratti Confirm kan jettu cuqaasuudhaan xumurta. Ani namootan asirratti tarreesse argisiisuu waanin hin barbaadneef akkuma argitan suuraa edit godhee haguugeen jira garuu akkaataansaa isiniif galeera jedheen yaada.
Hub:- jara kana keessaatii namni tokko yoo hamaa yaadee si fakkaatee reset ajajellee warri kaan isaan bira kan dhufe yoo dabalanii hin kennineef seenuu waan hin dandeenyeef hin yaadda’in. Ulfaadhaa!!!
Nageenya facebook account #1
Yeroo yerootti akkamitti facebook account keenya bakka biraatti hin banamin jiraachuusaa hordofuu dandeenya?
Session banamee jiru yookaan account keenya eessaa fi meeshaa kam irratti banamee akka jiru baruun dirqama dha. Keessumaa ganama ganama amaleeffattanii otuu akkasitti ilaaltaniitii otuu namni biraan seeneellee daftanii balaa biraaf otuu hin saaxilamin dhaabsisuu dandeessu.
Jalqaba Setting banuudhaan Security and Login kan jedhurratti click godhaa yookaan cuqaasaa, ergasii Where You’re Logged In kan jedhu jalatti bakkaa fi meeshaa irratti account keessan banamee jiru isiniif tarreessa. Yoo meeshaa baayye irratti banamee jiraateef see more kan jedhu irratti cuqaasuudhaan hundasaanii ilaaluu dandeessu. Akka suuraalee armaan gaditti irratti mul’atanitti yoo barbaaddan meeshaa yookaan bakka haaraa fi hin beekne kan isin shakkisiise jiraannaan isa qofa logout gochuu dandeessu kanaan achi Log Out Of All Sessions kan jedhu irratti cuqaasuudhaan hunduma keessaatii ba’uu dandeessu. Ergasii of eeggannoo dabalataaf password keessan jijjiiruun barbaachisaa dha.
Garaagarummaa WiFi fi Internet
WiFi jechuun qofaasaatti internet otuu hin taane teeknooloojii interneetii karaa shibootiin UTP yookaan fibre cable dhaan dhufe gara wireless yookaan shiboo malee fayyadamuu nu dandeessisu jechuu dha. Internet jechuun akkuman facebook fi internet garaagarummaasaanii yeroon isiniif ibse kaasetti hidhata yookaan neetoorkii kompiyuuteroota addunyaarra jiraanii jechuu dha. Kanaaf WiFi qofaan internet miti. Yeroo hedduu namootni mana interneetii seenanii “interneetiin hin jiruu?” yoo jedhanii hin jiru jedhaman “WiFi ammoo hin jiruu?” jedhu. Kun dogoggora dha. WiFi jechuun inteneetii isuma shiboodhaan dhufe meeshaa Wireless router yookaan Access Point jedhamuun gara shiboo maleetti jijjiiramee tajaajila interneetii argannu jechuu dha.
Garaagarummaa internet fi facebook
Internet jechuun gabaabaatti network yookaan hidhata kompiyuuteroota addunyaarra jiran hundaa jechuu yoo ta’u. Interneetii kana gubbaatti tajaajiloota adda addaa arganna.
Fakkeenyaaf gurguddoo fi ijoon:-
1. Tajaajila email
2. Tajaajila search engine yookaan kanneen akka google, yahoo, bing fi kan kana fakkaatan kanneen waa irratti search goonee yookaan barbaadnee argannu jechuu dha.
3. Tajaajila kaartaa fi suuraa saatelaayitiidhaan addunyaa ilaaluu fi bakka tokko argachuu.
4. Tajaajila kuusaa odeeffannoo tolaa fi kaffaltiidhaanii kanneen akka google drive fi dropbox. fi kan kana fakkaatan yoo ta’u.
Tajaajiloota kanneen keessaatii marsariitii yookaan website kan gosa social media(Network) yookaan miidiyaa hawaasaa jalatti kanneen ramadaman keessaatii tokko facebook dha. Kanaaf facebook fi interneetiin garaagarummaa qabachuu isaanii dagachuu hin qabnu. facebook jechuun tajaajila tokkittii interneetii gubbaatti argannu dha.
Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo irratti qorannoo OSA irratti dhiyaate. July 30, 2019
The 33rd Oromo Studies Association Annual Confrence (OSA) [ July 28, 2019] July 30, 2019
Untitled July 24, 2019
Daataa ilmaan Oromoo baatiilee muraasaa asitti hidhamanii kumootaan lakkaa’amanii mana hiraarsaa jiran muraasa kan Qeerroo Bilisummaa Oromoon walitti […]
“Warra nagaa jibbe, Qawwee na baachise” Qalbeessaa Dhangi’aan …… Daandii dheertuun silaa Gordubaa kee ka’e Utuman si jaalladhuun […]
Gochaan Oromoo irratti EPRDF’n bara kana raawwataa jiru haaloo bahannaa qabsoo sabichaa baroottan darbeeti! July 17, 2019
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Adooleessa 16,2019 Finfinnee Oromiyaa Qabsoo haqa qabeessa, fi qabsoo fakkeenya guddaa addunyaaf ta’u karaa nagaa […]
ONN LIVE | Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Adooleessa 13,2019 July 14, 2019
Untitled July 14, 2019
ONN LIVE | Qophii Addaa ONN: Waajjira ABO Kan Godina Wallagga Bahaa , magaalaa Naqamteetti argamu cabuu ilaalchisee […]